Mụọ asụsụ Bekee na asụsụ mba ọzọ maka Free. Mee ka okwu di mma
Isi ihe omuma
Ụkpụrụ Nkụzi International
Ngwa ngwa ngwa ngwa maka imeziwanye okwu na
Nkụzi nkuzi maka nkwukọrịta aka
n'etiti ndị ọkà okwu
LingoCard na-enye usoro ịkụzi mmụta mba ụwa maka ọmụmụ nke asụsụ mba ọ bụla na mkparịta ụka.
Anyị na-edozi isi nsogbu maka ndị mmụta asụsụ:
Ịkwalite okwu na nchekwa nke okwu ncheta
Enweghị oge maka ịmụ asụsụ mba ọzọ
Chọọnụ ndị ọkà okwu maka asụsụ maka omume asụsụ
Ngwa ngwa ngwa ngwa
Ihe karịrị puku puku abụọ site na asụsụ ndị a na-asụkarị n'ụwa
Nchịkọta nke databases data maka asụsụ mba ọzọ
Nchekwa igwe maka okwu ncheta gị
Na-ege ntị na okwu okwu na ahịrịokwu
Ikike ịmụ 67 asụsụ mba ọzọ na-enweghị njikọ Ịntanetị
Ịmepụta data nchekwa ahaziri iche na okwu ndị ị na-amụ ugbu a
Ụda ọdịyo dị iche iche na-egere ọdụ data gị na-akpaghị aka
Ịmepụta kaadị kọntaktị na foto nwere njikọ
Ụda ọkpụkpọ ọkpọka
Enweghi oge iji mụta ihe?
Site na ọkpụkpọ egwu pụrụ iche ị nwere ike ịmụta asụsụ oge ọ bụla na n'ebe ọ bụla:
Mgbe ị na-anya ụgbọ ala, na-egosipụta, na-arụ ọrụ - ya na azụmahịa ọ bụla.
Naanị họrọ nchekwa data ọ bụla, mepee ọkpụkpọ anyị ma gee ntị.
Ị chọrọ ịmụ ihe agụmakwụkwọ nke gị?
Enweghị nsogbu - naanị bulite faịlụ ederede gị na ngwa ngwa ma gee ntị!
Ihe mgbaru ọsọ anyị
Nhazi nke nyocha nke mba nile
Ihe okike nke na-enye gị ohere icheta okwu siri ike
Iche echiche nke kachasị data ọdụ data na otu akụ
Nyere ndi mmadu aka iburu okwu, okwu okwu na ahumaokwu
Ekepụta ngwa ngwa ngwa ngwa maka ndị si mba na asụsụ ọ bụla
Ndapụta ngwa ngwa na-arụ ọrụ na-enweghị njikọ Ịntanetị n'ebe ọ bụla n'ụwa
Enyemaka site n'ụlọ akwụkwọ asụsụ na ndị nkụzi nke asụsụ mba ọzọ
Ịmepụta ngwaọrụ maka ịme okwu okwu ziri ezi
Data nchekwa data bụ nchịkọta nke okwu gị na-echefu echefu (ahịrịokwu) nke agbakwunyere aka na-akpaghị aka site na nchekwa data ọ bụla site na ịpị ...
Data nchekwa data bụ nchịkọta nke okwu gị na-echefu echefu (ahịrịokwu) ndị ejiri aka na-agbakwụnye ma na-akpaghị aka site na nchekwa data ọ bụla site na ịpị bọtịnụ "Bugharịa na-arụ ọrụ". Data nchekwa data bụ isi ebe nchekwa nke okwu ọhụrụ gị na aro gị. Ịnwere ike ịgbakwunye okwu ole na ole a na-akparaghị ókè. A na - edepụta okwu ọ bụla ọzọ na ndepụta. Ị nwere ike pịa na listi na kaadị SIM na okwu a (ikpe) ga-emeghe. A na-echekwa nchekwa data dị na nchekwa na ngwa mgbe niile, n'agbanyeghị asụsụ gbanwere, nbudata ma ọ bụ dochie ọdụ data ndị ọzọ.
Ị nwere ike ịmepụta data data gị na ihe ọ bụla mmụta site na akwụkwọ ederede ma jiri ya na ngwaọrụ niile nke ngwa LingoCard.
Ị nwere ike ịmepụta data data gị na ihe ọ bụla mmụta site na akwụkwọ ederede ma jiri ya na ngwaọrụ niile nke ngwa LingoCard. Ogologo ozi ebudatara anaghị ejedebe. O kwere omume ịmepụta nchekwa data ọhụrụ ma ọ bụ gbakwunye data gaa na data dị na ebe a na-ebudata na mbụ. Site na ọrụ a, ị ga-enwe ike ịmepụtara onwe gị ihe ọ bụla izi ihe ma jiri ya na ngwaọrụ anyị maka iburu n'isi.
Ịmụ Ihe Ụlọ Nche
Ndekọ maka kaadị ndị a mụtara. Ọ bụrụ na ị mụọ kaadị ahụ, ịkwesịrị ịkwaga ya na nchekwa data "Nyocha" site na ịpị bọtịnụ "Enyocha" na n'elu ...
Ndekọ maka kaadị ndị a mụtara. Ọ bụrụ na ị mụọ kaadị ahụ, ịkwesịrị ịkwaga ya na nchekwa data "Enyocha" site na ịpị bọtịnụ "Enyocha" na elu nke kaadị emeghe. Na nchekwa data a ị ga-enwe ike ịdebe ọnụọgụgụ nke okwu ndị eburu n'isi na ikwughachi ihe a mụtara n'oge gara aga.
Okwu 500 a ma ama
Ihe nchekwa data a dabeere na nyocha nke okwu 500 kachasị mee ihe. Ebu ụzọ kpoo okwu iji mee ka a mara ha na ugboro ole ha na-eji okwu ekwu okwu.
Ihe nchekwa data a dabeere na nyocha nke okwu 500 kachasị mee ihe. Ebu ụzọ kpoo okwu iji mee ka a mara ha na ugboro ole ha na-eji okwu ekwu okwu. Edere ụkpụrụ kachasị mma na nsụgharị okwu ma okwu ọ bụla nwere ọtụtụ nkọwa nke nsụgharị, ụfọdụ n'ime ha nwere ike ịnwe na kaadị. Mpaghara nchekwa data "500 Okwu Nkọwa" nwere nchịkwa data 4624 nke ọ bụla ejikọtara 67 asụsụ a na-amụ maka ngwaọrụ gam akporo na 4489 ọdụ data maka ngwaọrụ IOS. Ị nwere ike ịhọrọ ebe a okwu a na-echefu echefu ma nyefee ha na "Akaụntụ Ọrụ" site na ịpị bọtịnụ "Bugharịa na-arụsi ọrụ ike" na klas ọ bụla meghere si na nchekwa data a.
Ihe nchekwa data a dabeere na nyocha nke okwu 5000 kachasị eji eme ihe. A na-etinye okwu n'ime usoro nke ugboro ole ha ji mee ihe n'asụsụ ederede na asụsụ. Ọ bụrụ n'oge ọzụzụ ...
Ihe nchekwa data a dabeere na nyocha nke okwu 5000 kachasị eji eme ihe. A na-etinye okwu n'ime usoro nke ugboro ole ha ji mee ihe n'asụsụ ederede na asụsụ. Ọ bụrụ n'oge ọzụzụ ị mechie ngwa ma ọ bụ hapụrụ nchekwa data ahụ ma chọọ ịlaghachi na kaadị mbụ, ị ga-etinye aha okwu ahụ n'ime igbe ọchụchọ ma pịa kaadị achọrọ. Mpaghara nchekwa data "5000 Popular Words" nwere nchịkwa data 4624 nke nchịkọta ọ bụla nke asụsụ 67 a gụrụ maka ngwaọrụ gam akporo na 4489 ọdụ data maka ngwaọrụ IOS.
Ihe nchekwa data a dabeere na nyocha nke okwu ahịrịokwu kachasị na okwu mkparịta ụka. Site n'enyemaka nke nchekwa data a ị nwere ike ịghọta isi okwu na-agbanwe na usoro nke ide ihe ...
Ihe nchekwa data a dabeere na nyocha nke okwu ahịrịokwu kachasị na okwu mkparịta ụka. Site n'enyemaka nke nchekwa data a, ị nwere ike ịghọta isi okwu ahụ na nhazi nke ederede n'asụsụ ị na-amụ. Tụkwasị na nke a, ị nwere ike ịmụta amaokwu ndị bụ isi e ji mee ihe na nkwurịta okwu n'asụsụ ọhụrụ. Ngalaba nchekwa data "500" nwere mpaghara ntanetị 4624 nke nchịkọta ọ bụla nke asụsụ 67 gụrụ maka ngwaọrụ gam akporo na 4489 ọdụ data maka ngwaọrụ IOS.
Mmekọrịta na ụlọ akwụkwọ ọ bụla
Aro maka imezi ngwa anyị
Nkwupụta maka iji ngwaahịa software ndị ọzọ
Jiri usoro ụzọ nkuzi ọhụrụ na ngwanrọ software anyị
Ịgbakwunye ọdụ data ọhụrụ na ngwa anyị
Mmekọrịta na mgbasa ozi na nkwalite
Anyị ga-enwe obi ụtọ ịtụle ụdị mmemme ọ bụla. Ị nwere ike izipu ozi ọ bụla ị nwere. Naanị jupụta n'ụdị dị n'okpuru.
NKWUKWU NDỊ GA-ECHICHE NDỊ MOBILE
Wụnye ngwa ahụ
Ịnwere ike ibudata ngwa anyị maka n'efu na Google play (maka ngwaọrụ gam akporo) ma ọ bụ ụlọ ahịa Apple (maka iPhones na iOS ngwaọrụ).
Mgbe echichi, ị ga-ahọrọ asụsụ asụsụ gị na asụsụ mmụta site na ndepụta ahụ, wee pịa bọtịnụ "MGBE NA-AMỤ" na ngwa ahụ ga-emepụta ọdụ data maka ịmụ asụsụ ahọrọ. Ọzọkwa, a ga-aha ọdụ data maka data ị banyere na ihe ọmụmụ ahụ. Ndepụta zuru ezu nke ọdụ data ị nwere ike ịhụ na ngwa ngwa.
Na ngwaọrụ ndị na-arụ ọrụ na ngwa gam akporo maka ịkwupụta okwu dị mma na ụda ọma nke onye ọkpụkpọ ahụ, ị ga-achọ ịwụnye (maka n'efu) ngwa ngwa "Google gaa na okwu" site na Google Play Market. Mgbe ị wụnye, ịkwesịrị imeghe ntọala ngwaọrụ, mepee "Asụsụ na ntinye", na "Text to speech" nke na-eme ka "Google ederede gaa na okwu" usoro nkwụsị. Igwe okwu olu na-arụ ọrụ na ọtụtụ n'ime ngwaọrụ na asụsụ mmụta. Ọ bụrụ na ị nwere nsogbu ọ bụla na ụda olu a, biko pịa bọtịnụ "Kpọtụrụ anyị" na menu ma dee banyere nsogbu gị.
Mepụta kaadị ọhụrụ ma jupụta data gị onwe gị
Iji tinye data gị ma mepụta kaadị ọhụrụ, pịa bọtịnụ mgbakwunye (+ na ala), na windo nke meghere, tinye ederede na asụsụ nke asụsụ na asụsụ mmụta. Na ibe ojiji nke kaadị, ị nwere ike pịa bọtịnụ ahụ na igwefoto, wee were foto nke ihe ahụ ma ọ bụ họrọ foto site na nchịkọta gị nwere ike idozi n'akụkụ ọ bụla nke kaadị ahụ. Ọ bụrụ na ịchọta ihe ma ọ bụ ihe na enweghi ihe a ma ama na asụsụ mmụta, ị nwere ike ime foto na ibe iji mepụta kaadị ma ọ bụ họrọ ihe oyiyi ọ bụla site na ngwaọrụ gị ma dee okwu mgbe e mesịrị. Enwere ike itinye ihe osise n'otu ụzọ ahụ kaadị ndị e kerela iji dozie eserese ihe oyiyi, ị nwere ike ime nke a site na ịpị bọtịnụ nhazi kaadị (pensụl n'elu menu).
Ngwaọrụ nwere ike ịjụ gị maka ikikere iji igwefoto (maka ịmepụta kaadị na foto). Ikwesiri ịzaghachi ozi a iji jiri ngwa ngwa a. Ọ bụrụ na ị zara "ee" na ozi ahụ, wee kpebie iji ọrụ nke ịgbakwunye foto - ị ga-ebughachi ngwa ahụ ma kwe ka iji ya emechaa.
Lee ma mepee kaadị
Ọrụ bụ isi nke ngwa ahụ bụ mmepụta nke usoro "Kaadị Flash" a na-ewu ewu na ngwaọrụ mkpanaka maka asụsụ mmụta dị irè, okwu ọhụrụ na ahịrịokwu. Iji lee "Kaadị Flash" ị chọrọ ịpị ndepụta ahụ na nchekwa data ahụ, mgbe nke a gasịrị, a ga-emepe kaadị ahụ. Iji lee kaadị na-esote, nanị swipe ihuenyo aka ekpe ma ọ bụ aka nri ma ọ bụ jiri bọtịnụ akụ. Iji hụ nsụgharị ma ọ bụ ihe okwu ahụ pụtara, pịa bọtịnụ "Flip" n'etiti etiti kaadị ahụ dị n'elu ederede ma ọ bụ akara "Flip" n'akụkụ ala aka ekpe.
Dezie / Detuo / Hichapụ kaadị
Iji dezie, ịkwesịrị imepe kaadị ọ bụla ma pịa bọtịnụ dezie (pensụl) n'elu menu. Iji chekwaa ederede site na kaadị, pịa bọtịnụ pịa na nri. Iji wepu klas site na ngwa ahụ, pịa bọtịnụ ahụ na oghere dị n'akụkụ aka nri.
Ịnyefe kaadị si na nchekwa data gaa na ọzọ
Ngwa ahụ na-enye gị ohere ịnyefee kaadị ọ bụla na "nchekwa" Ọrụ (nchịkọta nkeonwe) na "nchekwa" nke nchekwa. Ka ịnyefe na nchekwa data "Ọrụ," pịa bọtịnụ ala dị ka "Bugharịa gaa na-arụsi ọrụ ike," ka ị gaa na nchekwa data "Enyocha", ịkwesịrị ịpị bọtịnụ "Achọpụtara" (bọtịnụ dị n'elu klas akaebe).
Mgbanwe na akpa akpa nke kaadị (ngosi nke okwu / nsụgharị mbụ)
Ị nwere ike ịhọrọ mpaghara mbụ maka kaadi mmeghe (okwu ma ọ bụ nsụgharị). Iji mee nke a, mepee menu (na akuku aka ekpe) wee họrọ "Mepee akụkụ mbụ", nke pịa akara uru ahụ.
Ịhọrọ ma ọ bụ gbanwee nchekwa data
Iji gaa site na nchekwa data gaa na nke ọzọ, dị nnọọ pịa menu (na akaekpe aka ekpe) wee họrọ otu ị chọrọ site na listi ọdụ data, wee pịa ihe achọrọ ma ọ ga-emeghe.
Ị nwere ike ịgbanwe asụsụ ala ma ọ bụ mụtara na ngwa ahụ site na ịnweta ọkwa data dịka nhọrọ ọhụrụ gị. Iji mee nke a, mepee menu (na akaekpe aka ekpe) ma pịa bọtịnụ "Change asụsụ m", mgbe ahụ, nhọrọ nhọrọ asụsụ ga-emepe, ebe ị nwere ike ịgbanwe ha, mgbe ahụ, ịchọrọ ịpị bọtịnụ "Mepụta ọwa data ọhụrụ" . A ga-echekwa data "Ọrụ" na "Nyocha" gị, ndị ọzọ na-eji asụsụ ndị gbanwere agbanwe, dịka nhọrọ gị. Cheta na ịgbanwe asụsụ nke ntinye data (ịme kaadị) na asụsụ ọhụrụ ị họọrọ, ịkwesịrị ịtọ ha na ntọala ngwaọrụ gị!
Chọọnụ ma ọ bụ okwu
N'elu aka nri elu, enwere bọtịnụ nchọpụta, site na ịpị nke ị nwere ike ịchọta kaadị, okwu ma ọ bụ nsụgharị na nchekwa data.
Iji gee okwu okwu ahụ, ịkwesịrị ịpị bọtịnụ na ọkà okwu na ndepụta ma ọ bụ kaadị kaadị. Ị nwere ike ịtọ ọnọdụ akpaka maka ịṅa ntị okwu okwu site na ịmeghe menu ma pịa bọtịnụ redio na "Ihe akpọrọ akpọ", mgbe nke ọ bụla okwu ọ bụla na nsụgharị ahụ ga - adabere onwe ya mgbe ọ bụla mechara kaadị ọ bụla.
Na-agbanye ihe ọkpụkpọ ahụ
Iji malite ọkpụkpọ, ịkwesịrị ịpị bọtịnụ "ọkpọọ" n'elu panel (aka ekpe nke ọchụchọ). Pịa na bọtịnụ egwu na kaadị niile ga-ada ụda na-agbada n'usoro na oghere dị mfe na-echeta. Ka ịmalite onye ọkpụkpọ site na ebe ọ bụla na ndepụta ahụ, kwụsị ya ma pịgharịa gaa na ọnọdụ ahụ achọrọ, na ọnụ ọgụgụ nke kaadị egwu na-agbanwe agbanwe na-agbanwe agbanwe, wee pịa bọtịnụ bọtịnụ ma malite igwu site na ọnọdụ ahụ akọwapụtara. Iji mechie ọkpọọsọ pịa bọtịnụ "X" ozugbo. Cheta na na ngwaọrụ Android maka okwu okwu dị mma na ụda ọma nke onye ọkpụkpọ ahụ, ị ga-achọ ịwụnye (maka n'efu) ngwa ngwa "Google gaa na okwu" site na Google Play Market. Mgbe ị wụnye Google TTS, ịkwesịrị ịmepe ntọala ngwaọrụ, mepee "Asụsụ na ntinye", pịa mpaghara "Text to speech" ma mee "ihe ederede Google na okwu" usoro ntanetị.
Ịnabata na ịmepụta nchekwa data gị
Iji na-echekwa nchekwa data, ịkwesịrị ịmepụta otu ederede ederede na okwu ị na-amụta na otu ederede ederede na nsụgharị ma ọ bụ nkọwa na kọmputa gị. Iji mee nke a, detuo ederede site na akwụkwọ ọ bụla (dịka ọmụmaatụ site na exel) n'ime akwụkwọ ndetu kọmputa gị, wee pịa faịlụ ahụ - chekwaa dịka - na Ihe ngbanwe, họrọ UTF - 8. Ịhọrọ ngbanwe na UTF - 8 chọrọ ka ịzie gụọ ederede gị na ngwaọrụ ọ bụla.
Wee zipụ faịlụ ederede gị na ngwaọrụ gị site na iji email, nchekwa igwe ojii ma ọ bụ eriri USB. Gaa na menu ngwa, pịa bọtịnụ "Download Database", n'ime nhọrọ mepere emepe họrọ faịlụ ederede a zọpụta ma pịa "Mepụta bọtịnụ nchekwa data ọhụrụ".
Na ngwaọrụ Apple, ị ga-ebu ụzọ mepee faịlụ, kpatụ ntinye ma tinye faịlụ n'ime ngwa site na ịpị "Bubata na LingoCard".
Ị nwere ike ịmepụta nchekwa data ọhụrụ ma ọ bụ gbakwunye data na ihe dị adị site na ịhọrọ ihe kwesịrị ekwesị na windo meghere.
Maka Ntọala nchekwa data ekwesịrị ịhọrọ ya na listi ọdụ data. Site na ọrụ a, ị ga-enwe ike ịmepụtara onwe gị ihe mmụta ọ bụla ma jiri ya na ngwaọrụ anyị.
Ozi ezighi ezi. Kpọtụrụ anyị
Ọ bụrụ na ị hụ njehie na ngwa ahụ, nsụgharị na-ekwesịghị ekwesị ma ọ bụ na ịchọrọ ịchọrọ maka ngwa ngwa ahụ, biko pịa bọtịnụ "Kpọtụrụ anyị" na menu ma dee ozi gị.